Isahluko 7 Ukuqothuka kwe-NJ | Ukuchithwa kwesahluko 7 NJ
ikhaya / Isahluko 7 Ukubhengezwa
Isahluko 7 ukubhatala eNew York kuhlawula amatyala amaninzi.
Ukugcwalisa isahluko se-7 ukubhengezwa kwemali e-NJ kunceda abantu ukuba baphelise ukuhlukumeza abafowuneli bamatyala ngeminxeba kunye nezinye iinzame zokuqokelelwa kwababolekisi. Ukugcwalisa isahluko esitsha seJersey 7 ukubhengezwa kwamatyala kuya kumisa okwethutyana ukuthengiswa kwesherifu, kodwa kungangavumeli umnini mzi ukuba agcine ikhaya lakhe. Thetha nommeli we-NJ Bankruptcy malunga nokungafani phakathi kwesahluko 7 nesahluko 13 ukuba unemibuzo.
Kutheni le nto umntu othile enokufaka iSahluko 7 endaweni yokungabinamali kwisahluko 13?
Isahluko 13 ikunika ithuba lokusindisa ikhaya lakho ekubonakaleni kwe-NJ. Ukuba ungasemva kwiintlawulo zakho zobambiso kwaye uyafuna thintela ukubekwa phambili Zombini iSahluko 13 kunye ne-7 ziya kumisa ukuthengiswa kwe-NJ sheriff, kodwa iSahluko 13 sikuvumela ukuba usebenze kwisicwangciso sokuhlawulela ikhaya lakho kwaye uligcine. Iintlawulo zangaphambi kwexesha ekubanjisweni kwemali mboleko yemali kunye neminye imirhumo ingasasazwa ixesha elingaphezulu kwaye isenzo sangaphambili senkundla siyamiswa. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba ibhanki yakho icele ukuba ikhaya lakho lithengiswe ukuba abavumelani nesicwangciso sakho sokuhlawula.
Isahluko 7 ukubhengezwa kwemali esetyenziswa ngabantu abangenamatyala akhuselekileyo okanye abanayo nayiphi na impahla ekhuselekileyo abafuna ukuyigcina. Umzekelo, ukuba umnini-ndlu unetyala le- $ 300,000 kwikhaya elixabisa kuphela i- $ 150,000 kwisahluko 13 ukubhengezwa kwemali kungenzeka ukuba asilolona khetho lufanelekileyo. Nangona kunjalo, xa unolingano olungakumbi kuwe olukhuselekileyo lweeaseti kunokukhusela ezakho Ukuxolelwa okutsha kwe-New Jersey or I-Federal Bankruptcy Ukuxolelwa Isahluko se-NJ se13 ukubhengezwa njengombono olungcono kunokuphelisa zonke iiasethi zakho ezikhuselekileyo phantsi kwesahluko 7.
Ukuba uninzi lwetyala lakho lihambelana nekhadi letyala okanye ityala likagqirha liya kuhlawulwa ngokulula xa unamatyala, nangona kunjalo amatyala athile afana nemboleko-mali yomfundi aphantse angabikho.
Ukuthetha negqwetha le-NJ lokungabinamali kuya kukuvumela ukuba ufumane iingcebiso zeengcali malunga nokuba loluphi uhlobo lokubhanga olukufaneleyo.
Ngaba uvumelekile ukuba ungafayile kwiCandelo le-7 Bankruptcy e-NJ?
Uvavanyo lweNdlela yokuNcitshiswa kweNew York
I-New Jersey kuthetha ukuba uvavanyo lusebenza kubantu abanemivuzo ephezulu. Ibagcina ekubeni bagcwalise isahluko 7 xa babenokubuyisa ubuncinci kubabo bababo bababolekise imali phantsi kwesahluko 13 sokungabinamali. Oku kuthetha ukuba, ukuba umvuzo wakho ungaphantsi kwengeniso esetyenziswayo yeJersey ngobukhulu bosapho lwakho ungafaka ifayile kwiCandelo 7. Nangona kunjalo, ukuba umvuzo wakho ungaphezulu kunomvuzo ophakathi waseNew Jersey uya kudinga ukuqhuba umvuzo wakho ngokubala uvavanyo lweendlela zokujonga ukuba ungabuyisela na kwinxalenye yamatyala akho angakhuselekanga ngokwesahluko se-13.
Yeyiphi ikhululo esetyenziswayo kuVavanyo lweeNdlela zokuXela kwa 7
Ukuba amatyala akho ayingowamatyala wabathengi okanye ukuba ungumntu okhubazekileyo oligqala kwaye ulihlawulile ityala lakho ngexesha lokusebenza okanye usenza umsebenzi wokhuseleko welizwe unokukhululwa kuVavanyo lweendlela. Abasasazi bemikhosi kunye namaLungu eSizwe oGadi banokuxolelwa ukuba babeneentsuku ze-90 zomsebenzi osebenzayo kwaye basebenza ngeentsuku ze-540 ukusuka ngalo mhla wenkonzo.
Yintoni iNgeniso yaseMelika yaseNew Jersey?
Ingeniso ephakathi yeJersey Medium yinto eyenziwayo yindlu eseNew Jersey ngokusisiseko. Amakhaya anobukhulu obukhulu avunyelwe ukuba afumane umvuzo wokuphumelela kuvavanyo. Ukuba umvuzo wakho wekhaya ngoku ungaphantsi komvuzo we-New Jersey ophakathi kwendlu yobukhulu bakho kukho umnqwazi wokuthintela ukuba unelungelo lokufaka kwifayile yokubhanga kwisahluko se-7 kwaye uphumelele uvavanyo lweendlela.
Umvuzo wakho ophakathi usekwe kumvuzo wakho kwiinyanga zekhalenda ezintandathu ezidlulileyo. Umvuzo wakho wonyaka ungaphindwa kabini eli nani. Kuya kufuneka unikezele ngobungqina bemali engenayo xa ufayila ngokurhwaphilizwa kwezi nyanga ze-6. Nangona kunjalo, ukuba ungaphezulu komda wokufumana umvuzo ophakathi kodwa umvuzo wakho unqabile kwisithuba seenyanga ezintandathu ezidlulileyo, unokufuna ukulinda iinyanga ezimbalwa ukuzisa umvuzo wethu phantsi kwenqanaba eliphakathi leNew Jersey.
Ubungakanani beNdlu 1 Umntu 2 Abantu 3 Abantu 4 Abantu
INJONGO ENTSHA Yengeniso ephakathi $62,933 $75,305 $93,656 $114,886
Yongeza i- $ 8,400 kumntu ngamnye ongaphezulu kwe-4.
Uyacelwa ukuba uthathe ikhosi yokucebisa ngetyala ubuncinci kwiintsuku ze-180 ngaphambi kokugcwalisa ukubhengezwa kwesahluko 7. Oku kunokukhutshwa kwiimeko zongxamiseko, nangona kunjalo, iklasi inokugqitywa ngokulula kwiyure okanye ezimbini.
Ukuba unemibuzo eyongezelelweyo malunga nokugcwaliswa kweSahluko 13 Ukuchithwa. Nxibelelana nathi kwi (844) 5 - DEFENSE - (844) 533-3367 okanye usithumele nge-imeyile ku [Imeyile ikhuselwe]